Ezidumiweyo zokutya kwasekuseni
Ngokuqinisekileyo, abaninzi babone ukupapashwa kwee-cereal ezidumile kunye nezinye izidlo zokutya kwasekuseni ezidumile. Namhlanje bathandwa kakhulu: ukuthengisa kuyasikhuthaza ukuba luncedo kunye nokuba ukusetyenziswa kusindisa ixesha elide. Nangona kunjalo, yonke into ayinakulinganiswa. Xa ama-flakes ayenziwe kuphela kwisithako esisodwa, namhlanje bancediswa kunye namavolontiya ahlukahlukeneyo kunye nezilondolozo, ezingenakongeza ekuncedeni kwazo.
Ukupapashwa kuyasitshela kwaye kubonisa inani elikhulu lemveliso yeentlaka. Uninzi lwabo lwenziwa kwimizi. Nangona kunjalo, bonke abantu bafanele ba khumbule ukuba i-corn flakes ekongezeni kwingqolowa iqulethe isamba esikhulu seeshukela (esifana nekhekhe), into engabonakaliyo kwimpilo. Ngaphezu koko, abaninzi abazali banikela abantwana babo ingqolowa ngokutya kwasekuseni kunye ne-yogurt okanye ubisi. Ngokuchasene neenkolelo eziqhelekileyo malunga neenzuzo zentsholongwane ezomileyo, ukusetyenziswa kwazo okuqhubekayo kunokukhawuleza kukukhokelela ekutyebeni.
Ziziphi izidlo zasekuseni ezidumile?
Ukunyaniseka 14 iintsuku
Abantu abaninzi baphenjelelwa ngetengiso kwaye bayakholelwa kuyo. Enye yezona ziintlobo ezidumileyo zokutya okomileyo, oko kukuthi, iifomfesi zineenkomo ezomileyo ezibizwa ngokuba yiFitness ngeentsuku eziyi-14. Ngokuqinisekileyo wonk 'ubani wabona le ntengiso. Umenzi walolu hlobo lwesidlo sasekuseni uthembisa kubasetyhini abasebenzisa le ngqolowa ekudleni kwasekuseni kwaye endaweni yesifundo esikulo sasemini, ukulahleka kokunciphisa nokusebenza kakuhle. Nangona kunjalo, ukuhlolwa kwabafazi abaye bavavanya la maqabunga akude baqaphele: akusiwo onke amabhinqa achaza nayiphi na impembelelo. Ngokungaqhelekanga, kuphela ukuba umphumo uya kuba kuphela xa badla, abafazi bayazibona esinye isidlo. Oku kusenokwenzeka ukuba ichazwe ngento yokuba xa ukucwangcisa i-flakes balahlekelwa zonke iimpawu zabo ezincedo. Imbewu yokuqala iyiluncedo kwimpilo, kodwa kwinkqubo yokwenza i-cornflakes, itshintsha utshintsho oluninzi, yongeza ishukela, engabandakanyeki ekulahlekeni kwesisindo.
Izidlo zokutya eziqhelekileyo - i-porridge Hercules
Ngokuqhelekileyo, boogqirha kunye nabona basondlo bezondlo bajonga i-oat flakes ebalulekileyo kakhulu ebizwa ngokuba yi-Hercules. Ngaloo mibhobho, mhlawumbi, wonke umntu uyazi. Kuphela, kwaye uzilungiselele ukusetyenziswa, udinga, ulandele ezinye iingcomo, ezifana noku: uthele kuphela ngamanzi abilayo (kwaye akukho nhlobo yobisi, i-yogurt, i-kefir kunye neminye imikhiqizo efanayo), endaweni yeswekile yongeza inyosi (ekwayi-caloric, kodwa incinci kakhulu umthamo, kunokuba ushukela oqhelekileyo). Isidlo esinjalo esinempilo eninzi sinokusetyenziswa kunye nabantwana endaweni yokutya kwasekuseni. Ezi zikhuni ziza kuzalisa umzimba kunye namavithamini kunye neemaminerali. Ukongezelela, ziqukethe iifriji ezininzi, iintlawulo eziyaziwayo, mhlawumbi kuzo zonke kunye nokuhla.
Kwiindawo ezininzi zaseRashiya kukho abakhiqizi beengqolowa. Abaninzi babo bathumela iimveliso zabo kwezinye iindawo. Elinye lamashishini anjalo nguBririus (uphawu lokurhweba "uSizari"). Lo mvelisi ungomnye wamashishini amakhulu eRussia, ukuvelisa ukutya okumisiweyo okudliwayo. Namhlanje, isebenzisana namanethiwekhi amakhulu kwiRashiya, enika iimveliso eziphezulu.
Olunye udumo namhlanje luphawu lokutya okutya kwasekuseni - i-Cosmostars. Ngokuqinisekileyo wonk 'ubani uvile ngeenkukhu, ezijoliswe ikakhulu kubantwana. Ubume beeflegi zithetha ngale nto: indlela ukuhanjiswa kweentengiso kuthi, zonke zenziwe ngendlela ye-asterisk, kwaye ngoku iilethi. Abazali abaninzi banokubheka ukuba kuyindlela efanelekileyo yokutya kwasekuseni.
Bonke abantu banqume ngokuzimeleyo ukuba bathengele ukulungela ukutya ukutya. Okokuqala, xa ukhetha ukuba ufune ukuhamba, ufuna ntoni ukuba: ukuzonwabisa nje okanye ukugcina impilo. Kungcono ukhethe ezo ntlaka kunye ne-flavoring encinci kunye nokulondoloza izithako, kwaye, ngokuqinisekileyo, ushukela akuyona into eyona nto ingcono kwi-flakes. Yidla ukutya okudliwayo kwasekuseni kwimpilo!
I-tea enomsoco kwaye ithambileyo
Iintlawulo zesidlo sasekuseni esinempilo kunye nesempilweni
Iipropati ezisebenzayo zeparley
Isondlo esifanelekileyo nesilonda sesilonda
Indlela yokwenza umunyu wendlela?
U-Albina Dzhanabaeva wacaphukisa isityholo kwi-Instagram Maxim Galkin
Ukuphazamisa umntwana ukusuka othandweni lokuqala
Yintoni abayithanda kakhulu amadoda kumfazi?
Unokukunceda njani umntu osandul 'intombi
Fumana imfundo ephakamileyo nge-Intanethi
Kuphi na izinyosi zaseMelika zaphela?
I-Horoscope ngoDisemba, umfazi wase-Aries
I-recipe elula ye-cookie iteksiki yangempela
Ukutya ukutya uStton - kuyayinceda ngempela?
Iingcebiso zokukhulelwa umntwana
Indlela yokuphuma kwinkxwaleko yezoqoqosho
Umtsalane womtshato obalaseleyo
Ungagcina njani izinto zasebusika?